Walaayittaa Diichaan Dalalany Dachaasaa leenjisaa yeroo taasisuun muude – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Walaayittaa Diichaan Dalalany Dachaasaa leenjisaa yeroo taasisuun muude
On Jan 14, 2020 63
Finfinnee, Amajjii 5, 2012 (FBC) – Kilabni kubbaa miilaa Walaayittaa Diichaa muudama hoggansaa taasisuu beeksise.
Boordiin kilabichaa sababa qabxii dhabuu fi mormii cimaa deeggartoota isaan walga’ii ariifachiisa waameen murtee garagaraa dabarseera.
Boordichi leenjisummaa garicha gaggeessa kan turan Gabrakiristoos Biraarraan leenjisummaarra gaggeesseera.
Kanaan walqabatee itti aanaa leenjisaa kan turan obbo Dalalany Dachaasaa yeroodhaaf leenjisaa olaanaan garicha akka gaggeessan boordiin kilabichaa murteesseera.
Waggoota hedduuf kilabicha hoji gaggeessa olaanaa ta’uun tajaajilaa turan obbo Asaffaa Hoosisoo, preezdaantii hawaasa deeggartoota obbo Andu’aleem Shibbiruu akkasumaas daayreektara teekiniikaa obbo Taaddasee Mattaafariyaa itti gaafatamummaa isaanirra kaasuu ibsameera.
Bu’uuruma kanaan obbo Mitikkuu Haylee hojii gaggeessaa, Zalaalam Maatiwoos Daayrektara teekiniikaa fi gaggeessa garichaa akkasumaas Mikaa’el Waadaa preezdaanti hawaasa deeggartoota ta’uun muudamuu ragaan kilaba kubbaa miilaa Walaayitta Diichaarraa arganne ni muldhisa.
Loozaa Abarraa taphattuu cimtuu liigii dubratoota Maaltaa ta’uun badhaafamte
Liyooneel Meesiin bara 2020tti taphataa galii guddaa argatu ta’uu ibsame
Taphoota Priimeyar Liigii Ingilaand eda galgalaan Cheelsiin fi Woolviis dirraan ala…
Atleetota dorgommiiwwan idil addunyaarratti hirmaataniif qorannaan dooppiingii eegale
Loozaa Abarraa taphattuu cimtuu liigii dubratoota Maaltaa…
Liyooneel Meesiin bara 2020tti taphataa galii guddaa argatu…
Taphoota Priimeyar Liigii Ingilaand eda galgalaan Cheelsiin…